ဝါဒဖြန့်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝါဒဖြန့်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘက်လိုက်မှုရှိသော သတင်းအချက်အလက် ကို ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖတ်ရှုရသော လူထု က တစ်စုံတစ်ခု သို့ ဝါဒတစ်ခု ကို ယုံကြည်စေရန် ရည်စူး၍ ထိုသတင်းများကို ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် နိုင်ငံရေး ဘက်တွင် ဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေးကာလ အတွင်းက အသုံးပြုခဲ့သော ပိုစတာ
ထိုသတင်းများ သည် အမှန် အမှား ဟူ၍ ခွဲခြားရခက်သည်။ များသောအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးပြီး မတရားပေ။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို ကြာရှည်စေပြီး ဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲစေသည်။
၂ ဝါဒဖြန့်ခြင်း နှင့် စစ်အတွင်းအသုံး
၃ ဝါဒဖြန့်ခြင်း နှင့် ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်း
၄ ရှေးက အသုံးပြုခြင်းများ
၅ ဝါဒဖြန့်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ
ဝါဒဖြန့်ခြင်း ဟူသော propaganda စကားလုံးသည် လက်တင်ဘာသာ စကားမှ ဆင်းသက်သည်။ ရှေးဦး အဓိပ္ပာယ်မှာ ပျံ့နှံ့စေရန် အတွေးအခေါ် ဖြစ်သည်။ သို့သော ပထမ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှ စ၍ သတင်းမှား ကို ဦးတည်သော နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူကြသည်။ ထို propagate ဆိုသော စကားလုံး မူလတရားကိုယ် ၌က ဆပွားခြင်း ဟု အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သည်။
တခါတလေ ဝါဒဖြန့်ခြင်း သည် ကြော်ငြာ ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ဝါဒဖြန့်ခြင်း သည်လည်း မီဒီယာထု ကို အသုံးချသည်။ သို့သော် ကြော်ငြာဟူသည် တစ်စုံတစ်ခု ကို ရောင်းရစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ဝါဒဖြန့်ခြင်း သည် အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရများ၊ ပါတီများကသာ အသုံးချပြီး၊ ကုမ္ပဏီများက အသုံးမပြုပေ။
ဝါဒဖြန့်ခြင်း နှင့် စစ်အတွင်းအသုံးပြင်ဆင်
လွတ်လပ်ရေးတပ်တွင်း ဝင်ရန် နိုးဆော်သော ပိုစတာ
ဝါဒဖြန့်ခြင်း ကို စစ်အတွင်း အသုံးများသည်။ အသုံးလည်း ဝင်သည်။ ပိုစတာ များ၊ တီဗီ ကြော်ငြာများ၊ ရေဒီယို ကြေညာချက် များ အသွင် နှင့် ဖြစ်သည်။ တခါတရံ မိမိ တိုင်းပြည် ပါဝင်သော စစ်ပွဲ အနိုင်ရနေသည် ဟု ကြေညာခြင်း ဖြင့် တိုင်းပြည်၏ လူများ ကို ပျော်ရွှင် တက်ကြွစေရန် သုံးသည်။ တခါတရံ ရန်သူ ကို လူဆိုး၊ လူရမ်းကား နှင့် လူစိတ်မရှိသူများ အဖြစ် မြင်အောင်ပြော၍ လူထု က မုန်းတီးစေရန် သုံးသည်။ (ဥပမာ-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ ဖက်ဆစ် ) ရန်သူ၏ စစ်ပွဲအရှုံးများ နှင့် ရန်သူစစ်ဗိုလ်ကြီးများ၏ ဘက်ပြောင်းခြင်း များကို ဖော်ပြ၍ စစ်ပွဲ ရပ်သင့်ကြောင်း ပြောပြီး ရန်သူများ ကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလို ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိသည်။
စစ်အတွင်း မဟုတ်လျှင်သော်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ လူထုက တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အကောင်းချည်းမြင်စေရန် အစိုးရများက သုံးသည်။
ဝါဒဖြန့်ခြင်း နှင့် ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းပြင်ဆင်
တချို့ အာဏာရှင် နိုင်ငံများတွင် ဆင်ဆာပိတ်ခြင်း နှင့် တွဲသုံးသည်။ ကောင်းသတင်း များကို ဝါဒဖြန့်နေသလို ဆိုးသတင်းများကိုလည်း ဆင်ဆာနှင့် ပိတ်ထားတတ်သည်။ အမြင်မှားများကို ဝါဒဖြန့်နေသလို ထိုအမြင်ကို သဘောမတူ သူများကိုလည်း နူတ်ဆိတ်နေစေရန် ဆင်ဆာဖြတ်သည်။ ထို့နောက် သဘောမတူသူများက အများသိအောင် မေးခွန်း ထုတ်ခွင့် မရသောအခါ ဝါဒဖြန့်ခြင်းသည် အမှန်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။
လူထုပါလာစေရန် လိမ်လည်ပြီး ဝါဒဖြန့်ခြင်းလည်း ရှိသည်။ ဘာသာတချို့ကလည်း သူတို့ ဘာသာဝင်ဖြစ်လာစေရန် ဝါဒဖြန့်လေ့ရှိသည်။
ဝါဒဖြန့်ခြင်း ကို ခေတ်တိုင်း ခေတ်တိုင်း တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရှေးအီဂျစ်ပြည်တွင် ရမ်ဆေး ၂ က ရုပ်တုများ၊ အဆောက်အဦးများတွင် လည်းကောင်း၊ ရှေးဂရိ ကွက်စိပ်ဆရာများ က လည်းကောင်း၊ ဂျူးလီးယက်ဆီဇာ နှင့် ရောမအုပ်ချုပ်သူများ က လည်းကောင်း သုံးခဲ့ကြသည်။
အထင်ရှားဆုံးသော ဝါဒဖြန့်မှုသည် ၁၂ရာစု တွင် တည်ထောင်သော the Inquisition ခေါ် ဘုရင်ဂျီဂိုဏ်းနှင့် အယူမတူသူ များကို နိုပ်ကွပ်သော အဖွဲ့မှ ဖြစ်သည်။ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း မှ Sacred Congregation for the Propagation of the Faith (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) ခေါ် သဒ္ဓါတရားပွားများစေရန် ကြီးမြတ်သော ဝတ်ပြုသူများ အဖွဲ့ ဖြင့် အားဖြည့်ထားသည်။ ပုပ်ရဟန်း ဂရီေဂါ်ရီ ၁၅ မှ ၁၆၂၂ ခုနှစ် တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး ဥရောပ နိုင်ငံအများစု တွင် လုပ်ငန်းကော်မတီခွဲများ ရှိသည်။ ဒေသခံ အဖွဲ့ခွဲများစွာ လည်းရှိပြီး ၎င်းတို့က အမြင်မတူသူများ ကို ရှာဖွေသည်။ ထို့နောက် နိုပ်စက်မှုများ နှင့် ကားစင်တွင် မီးရှို့သတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ဖြင့် အများရှေ့တွင် အမြင်မတူမှု ကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာ ခိုင်းသည်။ ရည်ရွယ်ချက် မှာကား ဘာသာရေး တွင် ဘုရားကျောင်း ၏ အရေးပါမှုကို ခြိမ်းခြောက်သော ဓမ္တရာယ် မှန်သမျှကို ဖယ်ရှားရန် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝါဒဖြန့်ရုပ်ရှင်ကား များကို ပေါ်လစီကား ဟူ၍ လည်းခေါ်ကြသည်။
↑ Lea၊ Henry Charles။ "Chapter VII. The Inquisition Founded"။ A History of the Inquisition in the Middle Ages။ 1။ 13 October 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-10-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Obstinate heretics, refusing to abjure and return to the Church with due penance, and those who after abjuration relapsed, were to be abandoned to the secular arm for fitting punishment. Cite has empty unknown parameters: |origdate= နှင့် |origmonth= (အကူအညီ)
↑ Kirsch၊ Jonathan။ The Grand Inquisitors Manual:ahistory of terror in the name of God။ HarperOne။ ISBN 0060816996။ 2010-06-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Cite has empty unknown parameter: |origmonth= (အကူအညီ)
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 November 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။9November 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါဒဖြန့်ခြင်း&oldid=674014" မှ ရယူရန်
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။